Pixel Power dia manampy ny kapila IP voafaritry ny IP voafaritry ny rindrina noforonina hametraka ny StreamMaster Integrated Playout - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Pixel Power dia manampy ny Software Defined Uncomeded IP Fahaiza-mametraka amin'ny napetraka StreamMaster Integrated Playout
Pixel Power dia manampy ny Software Defined Uncomeded IP Fahaiza-mametraka amin'ny napetraka StreamMaster Integrated Playout
IBC2019, 13-17 Septambra, Mitsangana 7.A05: Pixel Power efa nanambara androany fa hanampy ny IP playback tsy voafehy, mifototra amin'ny SMPTE Fianakavian'i ST 2110, ao amin'ny teknolojia playout StreamMaster efa voaorina tsara. Ny fandrosoana dia tonga toy ny fandrosoana voajanahary amin'ny fampidirana ireo fenitra vaovao ao anatin'ny sehatry ny haitao voafaritry ny rindrambaiko: StreamMaster Media Processing and Gallium Workflow Orchestration. Toy ny fiasa rehetra amin'ny StreamMaster sy Gallium, ny SMTPE ST 2110 dia tohana ho toy ny vahaolana amin'ny rindrambaiko na eo amin'ny premise na virtoaly ao amin'ny foibe data.
“Na dia mino izahay SMPTE Ny ST 2110 dia azo antoka fa lalana mankany amin'ny fotoana maharitra, mbola misy ny mileage amin'ny fenitra toy ny ST 2022-6, satria ny mpampita ny vaovao dia mitovy amin'ny arsitekatran'ny SDI, "hoy i James Gilbert, Tale Jeneralin'ny CEO. Pixel Power. “Ny andian-tsarimihetsika vaovao amin'ny serivisy fanaterana sy fandefasana vaovao, anisan'izany ny automation, graphic ary branding dia miorina amin'ny sehatry ny teknolojia StreamMaster Media Processing izay afaka havaozina mora foana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko. Ny fandanjalanjana ny sehatra mifototra IP, rindrambaiko voafaritry ny rindrambaiko sy automatique dia tena mampiseho ny lanjany - izany no antony ametrahanay azy ireo miaraka amin'ireo mpampita vaovao nasionaly manerana izao tontolo izao. ”
The SMPTE ST 2110 Professional Media Over Over Managing IP Networks suite of standard dia tohanana lehibe amin'ny hetsika ho an'ny iray amin'ireo IP-n'ny fifandraisana manokana mifototra IP ho an'ny indostrian'ny haino aman-jery matihanina. Ny fototra ho an'ny SMPTE Ny fenitry ny ST 2110 dia Forum Serivisy Video (VSF) Fangatahana ara-teknika ho an'ny fitaterana ny Elementary Stream Media Over IP (TR-03). The SMPTE Ny fenitry ny ST 2110 dia voafaritra amin'ny alàlan'ny fampakarana, ny fampifanarahana ary ny famaritana ny alàlan'ny renirano fototra fototra manerana ny IP ho an'ny famokarana famerenam-bola sy ny lalao ary ny fampiharana amin'ny haino aman-jery matihanina.
Pixel Power manana tantaran'ny famotehana toerana vaovao ary tompon'andraikitra telo-polo taona lasa izay noho ny nandefasany ireo mpanao gazety amin'ny tontolon'ny rafitra grika miorina amin'ny PC raha nitombo ny isany fantsona izany. Voalohany ho tsena miaraka amin'ny playout virtoaly mivantana ao amin'ny rahona ao 2015, Pixel Power ihany koa dia nandray ny dingana voalohany tamin'ny fampisehoana ny mpampita ny hery sy ny fitoniana ny arofanina mifototra amin'ny fisintonana fitaterana IP sy ny fampindramam-pitiavana. Amin'ny IBC2019, Pixel Power haseho ny fomba hahazoan'ny mpampita vaovao mandray soa amin'ny fifindrana amin'ny rindrambaiko voafaritra tsara ho an'ny famokarana, playout, automation, branding ary sary.
Pixel Power azo jerena ao amin'ny IBC2019 (Amsterdam, 13 - 17 septambra) ao amin'ny toerany tsy tapaka ao amin'ny Hall 7, Mitsangana 7.A05.
Pixel Power dia manome ny famokarana grafika vaovao sy rafitra fanontam-pirinty miditra ho an'ny fampielezam-peo, orinasa mpamokatra kamiao ivelany, toeram-pijerem-pitaterana, trano famokarana, toerana ary toeram-piompiana. Ny famelabelaran-kevitra sy ny fampiroboroboana ny famolavolan-kevitry ny famolavolan-kevitra, ireo rafitra maoderina nampiasa ny rafitra fametrahana rafitra maoderina sy ireo rafitra famokarana maoderina dia mamela ireo mpamokatra hamoaka ny votoatim-piainana miaina sy mialoha izay voarakitra amin'ny SD, HD, 4k, fampiharana finday, aterineto na interactive.
Pixel Power dia manana traikefa amin'ny taona 30 momba ny fahaiza-manaon'ny engineering ary ny fanoloran-tena amin'ny fanohanana ny mpanjifa izay nahatonga azy io ho safidy voalohany amin'ny sehatry ny indostria amin'ny sary, marking and playout. Miaraka amin'ny fametrahana 2500 hafa manerana izao tontolo izao, ny mpanjifa dia tafiditra ao anatin'izany ny fampielezam-baovao mivantana toy ny Al Jazeera, BBC, CBC, Disney, Discovery, Ericsson, ESPN, Sky, ViaSat ary WDR.
Miaraka amin'ny foiben'ny orinasa any Cambridge, UK, ary amin'ny biraom-paritra ao amin'ny Grass Valley, California sy Dubai, UAE, Pixel Power dia manana fikambanana iraisam-pirenena ary tohanan'ny tambajotran'ny mpaninjara mendrika sy voatendry.
Pixel Power Afaka mifandray an-tserasera amin'ny at www.pixelpower.com.
Anarana: Ciaran Doran
Lohateny: Exec VP
Anarana: Jennie Marwick-Evans
2019 IBC fampitana injeniera fampitana Engineering Gallium ™ Workflow Orchestration Graphics IBC ip haino aman-jery TAOZAVABAVENTY Pixel Power playout Famokarana tena izy Rohde & Schwarz SDI SMPTE 2110 ST 2022-6 StreamMaster Fitsapana Media StreamMaster Media tsy mifangaro amin'ny Elemetary Stream amin'ny IP Video Services Forum virtuialization	2019-09-11
Previous: Ny Tiger Technology dia mampiseho ny fitahirizana fiaraha-miasa sy ny alàlan'ny workflows amin'ny IBC 2019
Next: Hitomi sy Broadcast Wireless Systems dia hanao demo sync sy alignment ho an'ny famokarana lavitra any amin'ny IBC 2019